डढेलो अपडेट : पृथ्वीमा एक फन्को घुमेर यसरी पुग्दैछ फेरि अस्ट्रेलियामा धुवाँ
प्रधानमन्त्रीले मागे माफी !
अस्ट्रेलियामा ठूलो डढेलोको धुवाँ पृथ्वीमा एक फन्को घुमेर छिट्टै अस्ट्रेलिया नै पुग्ने नासाले बताएको छ। महिनौँदेखि अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ र त्यसको धुवाँ प्रशान्त महासागरतर्फ बढेको जनाएको छ।
नासाका अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिनको धुवाँ अहिले उत्तर अमेरिका पार भएको र जनावरी ८ सम्म पृथ्वी आधा घुमेको नासाको भनाइ छ।
४.४ अर्ब डलर स्वाहा
उक्त धुवाँले पृथ्वीको कम्तीमा एक फन्को लगाउने अपेक्षा गरिएको अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्थाले बताएको छ।
अस्ट्रेलियामा सयौँ स्थानमा डढेलो लागेको र त्यसले कम्तीमा २८ जनाको ज्यान लिनुको साथै २ हजार घर ध्वस्त बनाएको छ।
नासाका अनुसार ती डढेलोहरू यति विशाल छन् कि तिनले अस्वाभाविक रूपमा धेरै आगोका कारण हुने आँधीबेहरी ल्याएका छन्। त्यसको कारण धुवाँ आकाशको धेरै नै माथि पुगेको छ। धुवाँ १७.७ किलोमिटर माथिसम्म पुगेको नासाको तथ्याङ्क छ।
अस्ट्रेलियाको आगो निभाउन नग्न तस्बीरबाट वार्डले कमाइन् १ अर्ब !
'त्यति माथि पुगेको धुवाँ संसारभरको आकाशको अवस्थालाई प्रभावित पार्दै पृथ्वी घुम्न सक्छ,' नासाले भनेको छ। नासाले त्यो उचाइको धुवाँले आकाशलाई चिस्याउने वा तताउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।
३० सेकेन्डले बदलिएको एउटा देश !
दस वर्ष अघि एक ठूलो भूकम्पले निम्त्याएको कहरले हैटीको राजधानी पोर्ट–ओ–प्रिन्सका लागि केही सेकेण्डभित्र दुस्वप्नमा बदलियो । एक सातामै ७० हजार मानिसको अन्त्यष्टि गरिएको थिष्यो । त्यसपछि पनि लाखौँको ज्यान गयो ।सन् २०१० जनवरी १२ मा आएको ७ रेक्टर स्केलको भूकम्पले हैटीको इतिहासलाई नै दुई भागमा विभाजन ग-यो : भूकम्प अघि र भूकम्पपछि ।
डक्टर विदआउट बोर्डस’सँग आबद्ध एक मनोविज्ञ नरोमी जोसेफको विश्लेषणमा देशको दुर्भाग्यले विगत दशकमा मानसिक आघातमा झन्भन्दा झन् तनाव थपिएको छ ।
‘मलाई सबैभन्दा दुःख केमा लाग्छ भने सन् २०१०को भूकम्पपछि हैटीका नागरिक र यहाँका शासकअघि यो देशलाई राम्रो बनाउने अवसर आएको थियो,’ प्रेभिलले भने, ‘तर त्यस्तो केही भएन । मेरो देशका नेता त झन् स्वार्थी भए र थप लुटिरहेका छन् । तिनले देशलाई बदल्ने अबसरलाई छोप्नु त कता हो कता अवस्था झन् खराब बनाइदिए ।